Muxuu Jakarta u quusayaa? Wax walba waan kuu sharxeynaa | Saadaasha Shabakadda
Yakarta se hunde
Jarmal Portillo | | Isbedelka Cimilada
Waxaan ognahay in isbedelka cimilada uu ka mid yahay masiibooyinka adduunka ugu halista badan ee aadamuhu la kulmo qarnigan. Jakarta waxay noqotay mid kamid ah magaalooyinka bilaaba inay si deg deg ah uga quustaan ​​magaalooyinka kale ee adduunka intiisa kale. Sida laga soo xigtay khubarada, waxaa lagu qiyaasaa in seddex meelood meel dadka ay biyo qarqin karaan sanadka 2050 hadii heerka sii socda ee heerka badda uu sii socdo. Sidaa darteed, waxaa la ogyahay in ku dhow hubaal ahaan in Jakarta qubeysa.
Qormadan, waxaannu kuu sheegaynaa waxa ka dhalan kara isbeddelka cimilada ee sida xun u saameeya kor u kaca heerka badda iyo sababta Jakarta u quusayso.
1 Muxuu Jakarta u quusayaa?
3 Saxarada Jakarta iyo dawooyinka suurtogalka ah
4 Magaalooyinka libiqsada
Muxuu Jakarta u quusayaa?
Waxaan ognahay in isbedelka cimilada uu kordhiyo celceliska heerkulka meeraha oo dhan sababo la xiriira kuleylka adduunka. Tobanaan sano oo ah nabaad guurka shidaalka foosha xun iyo adeegsiga saadka biyaha dhulka hoostiisa ah, iyo sidoo kale heerarka badda ee sii kordhaya iyo astaamaha cimilada ayaa si sii kordheysa u sii qulqulaya aagagga xeebaha. Waxay u muuqataa in meelo kala duwan oo bariga Jakarta ah ay bilaabayaan inay baaba'aan sababo la xiriira heerarka badda oo sare u kacaya.
Maskaxda ku hay in Jakarta lagu dhisay aag dhulgariir oo leh dhul qoyan. Aaggan 13 webi ayaa ku kulma meesha ay iskaga imaanayaan, markaa carrada ayaa u nugul. Waa inaan sidoo kale ku darnaa xaqiiqadan jiritaanka taraafikada culus, dad badan iyo qorshe xumo magaalo. Jakarta ayaa sii degaysa maaddaama aysan lahayn nidaam biyo tuubooyin ah waqooyiga fog, sidaa darteed warshadaha maxalliga ah iyo dhowr milyan oo kale oo dadka deegaanka ah ayaa ka faa'iideysanaya biyo-mareennada dhulka hoostiisa mara.
Markii laga faa'iideysanayo biyo-mareenadan dhulka hoostiisa mara waxay horey u lahaan jireen qaar ka mid ah saameynta ku keenaysa Jakarta inay degto. Haddii aan biyaha dhulka hoostiisa ku soo saarno si aan la xakamayn karin, waxaan sababi doonnaa waayitaanka taageerada ciidda. Dusha sare ee dhulku wuu is badalayaa maqnaanshaha taageero taageeri karta culeyska. Sidaa darteed, soo saarista ballaaran iyo baaxadda ballaaran ee biyo waxay sababi doontaa inuu dhulku deggo. Tani waxay samaysaa Jakarta wuxuu labaad ilaa 25 sentimitir sanadkii meelaha qaar meelaha ay ugu nugul yihiin. Qiimayaashan hoos-u-dhiggu waa labanlaab celceliska adduunka ee magaalooyinka waaweyn ee xeebta.
Waan ognahay taas qaybo ka mid ah Jakarta waxay qiyaastii 4 mitir ka hooseeyaan heerka badda. Tani waxay si aan macquul ahayn u bedeshaa muuqaalka waxayna ka tagtaa malaayiin dad ah oo u nugul masiibooyinka dabiiciga ah ee jira. Haddii aan tixgelinno in isbeddelka cimilada uu dhalaalayo barafka barafka ee adduunka oo dhan, heerka badda ayaa kor u kici doona sannadaha. Waqti badan ayaa dhaafa, dhibaatooyinka badan ayaa jiri doona oo Jakarta ayaa quusaysa.
Xaaladda noocan oo kale ah, daadadka ayaa noqda kuwo caadi ah, gaar ahaan xilliga qoyan ee waddanka kulaylaha. Saadaashu waxay qiyaaseysaa in cawaaqibka daadadku way kasii darayaan iyadoo heerarka badda ay sare u kacayaan kulaylka adduunka awgeed. Qeybta hoose ee dhulku waa marka loo eego heerka badda iyo kor u kaca, cawaaqib xumada ayaa sii kordheysa oo ka sii halista badan. Ma aha oo kaliya in dhaqaalaha wax laga bedeli doono, laakiin waxaa jiri doona qax xoog ah oo dadka loogu hayaami doono dhulka gudaha ah.
Waxaa jira aagag ka tirsan Jakarta oo la qabsaday sababo la xiriira kor u kaca heerka badda oo sababay inay degto meelaha magaalada ka mid ah.
Saxarada Jakarta iyo dawooyinka suurtogalka ah
Daawooyinka la soo jeediyey ee lagu yareynayo xaaladan waxaa ka mid ah oggolaanshaha qorshe ujeedkiisu yahay in laga dhiso jasiirado macmal ah Jakarta Bay. Jasiiraddani waxay u dhaqmi doonaan sidii nooc ka mid ah bakhaarrada ka soo horjeedda Badda Java oo ka dhigaya kor u kaca heerka badda inuusan ahayn mid kadis ah. Waxaa sidoo kale la soo jeediyay in la dhiso derbi weyn oo xeebeed. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan jirta ma jiraan wax damaanad ah oo mashruuca lagu qiyaasay miisaaniyad dhan 40 bilyan oo doolar ayaa xallin karta dhibaatooyinka magaalada sii liqaysa.
Waan ognahay Jakarta inay quusayso, hadana mashruucan waxaa dib u dhigay sanado badan oo dib udhac ah taasoo ka dhigaysa dhismaha mid aad u adag. Dhismaha caqabadaha si loo yareeyo saameynta heerarka badda ee sii kordhaya horay ayaa loo tijaabiyay. Darbi shub ah ayaa laga dhisay xeebta degmada Rasdi iyo dhowr kale oo qatar badan leh. Si kastaba ha noqotee, darbiyadan ayaa durbadiiba dillaacay waxayna muujiyeen astaamo hoos u dhac. Suurtagal ma ahayn in laga hortago in biyuhu soo galaan oo ay bilaabaan inay abuuraan dildilaac. Biyo ayaa ka soo qulqulaya darbiyadan waxayna qarqinayaan dhamaanba ciriiriga jidadka cidhiidhiga ah iyo guryaha guryaha laga buuxo ee xaafadaha ugu saboolsan magaalada. Waxaas oo dhan waxaa ka dhasha nadaafad darro iyo miisaaniyad la'aan.
Maaddaama tallaabooyinka deegaanka ee jira ay saameyn yar yeesheen, mas'uuliyiinta ayaa raadinaya tallaabooyin kale oo aad u culus. Qiyaasta ayaa ah in qaranku raadsado raasamaal kale oo cusub. Goobta ayaa si dhakhso leh loogu dhawaaqi karaa, ugu ammaansan ayaa ah in magaalada oo dhan lagu wareejiyo jasiiradda Borneo.
Waa wax caqabad ah in la raro wadnaha maamulka iyo siyaasadda ee dalka, laakiin waxay u adeegi kartaa ficil qaran oo lagu ilaalinayo. Maskaxda ku hay in qorshahani yahay mid qatar ah oo u eg geerida Jakarta.
Kaliya maahan inuu Jakarta quusto, laakiin waxaa jira magaalooyin kale oo magaalooyin sidoo kale. Dunida oo dhan waxaa jira magaalooyin xeebeed leh u nuglaanta dhibaatooyinka heerarka badda iyo isbeddelka cimilada. Magaalooyin kala duwan Venice iyo Shanghai, ilaa New Orleans iyo Bangkok. Dhammaan magaalooyinkan waxay halis ugu jiraan inay burburto, laakiin waa in la ogaadaa in Jakarta uusan wax badan ka qaban dhibaatadan.
Yaanan ilaawin isbeddelka cimilada ma aha oo kaliya inuu kordhiyo heerarka badda, laakiin sidoo kale soo noqnoqoshada duufaannada kulaylaha ee sababa masiibooyinka waaweyn ee magaalooyinka xeebta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto jaangooyada Jakarta ee degaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Yakarta se hunde